April 26, 2018 June 15, 2018 itvnepalLeaveaComment on कम्युनिस्ट आन्दोलन संगै अब कम्युनिस्टको बाटो के ??
– योगेश भट्टराई
हामी नेपालीहरू अरूले गरेको कामको ज्यादै प्रशंसा गर्छौ । त्योभन्दा ठूला काम हामी आफैँले गरेका हुन्छौं तर हामी त्यसलाई या त देख्दैनौं या कम ठान्छौं । हामीले नेपालमा जुन मोडलका क्रान्तिहरू गर्दै आएका छौ, त्यो दुनियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, क्रान्तिमा विशिष्ट योगदान दिने खालका छन् । लेनिनले गर्नुभएको अक्टोबर क्रान्ति, माओत्से तुङले गर्नुभएको चिनियाँ क्रान्तिबाट हामी रोमाञ्चित हुन्छौं तर पछिल्लो दशकदेखि आज एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासम्म आइपुग्दा हामीले नेपालमा जुन क्रान्ति गर्यौ र त्यसको अगुवाइ पछिल्लो दिनमा केपी ओली र प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुनै अक्टोबर वा चिनियाँ क्रान्तिभन्दा कम मूल्यको क्रान्ति होइन । यसको मूल्य धेरै माथि छ ।
हामीले अमेरिकाको स्वतन्त्रताको संग्राम हाम्रो विश्वविद्ययालयमा पढाउँछौं । बेलायतको मेग्नाकार्टाको इतिहास हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाउँछौं । युरोपतिरको पुँजिवादी क्रान्तिको इतिहास, चाहे त्यो टेनिसकोर्टको इतिहास होस्, चाहे अरू ठूला क्रान्तिका इतिहास किन नहुन्, ती हाम्रा विश्वविद्यायलयमा पढाइन्छन् । तर, अब हामीले अमेरिका, बेलायतलगायतका पाठ्यक्रम बनाउने विद्वानहरूलाई भन्नैपर्छ–नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास पढाऊ अब । प्रचण्ड र केपी ओलीले हामी अहिल्यै गएर पढाउँछौं भन्नुहुन्छ भने पनि हामी उहाँहरूलाई बिदा दिन तयार छौं । पाँच–सात वर्ष यतै राजनीति गर्न दिनुस् भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि गएर पढाए पनि हुन्छ । किनकि, उहाँहरू भनेको रोल मोडल हो । कसरी नेपालमा संविधानसभा–व्यवस्थापिकाको बैठकले २ सय ५० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको एउटा सामन्ती राज्यव्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गरेको राजसंस्थालाई बिदा गर्यो ? फलानो मितिबाट तिमी दरबार छाडेर जानू भनेकै मितिमा उनी दरबार छाडेर गए ।
के दुनियाँको कुनै त्यस्तो इतिहास छ ? कहाँको राजतन्त्र त्यसरी गयो ? कहाँका सम्राटहरू त्यसरी गए ? कुनै सम्राटहरू पनि त्यसरी गएनन्, उनीहरू अन्तिमसम्म पनि बल प्रयोग गरेर बसेका थिए । तर, नेपाल, जहाँ गौतम बुद्ध जन्मेका छन्, बुद्ध जन्मेको भूमि भएको हुनाले निर्वाचित संस्थाले आदेश दिदाँ यहाँका सम्राट कुम्लो बोकेर गए । के यो हामीले अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा नपढाउने ? तिमीहरूको स्वतन्त्रता संग्राममा के भयो ? उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ । बेलायतीहरूलाई सोध्नुपर्छ– तिम्रा सम्राटहरू कसरी गए ? कसरी आए ? त्योभन्दा बेग्लै ढंगले हामीले हाम्रो इतिहास बनायौं । त्यसैले नेपाल आज दुनियाँका अगाडी नमुना देशका रूपमा स्थापित छ । संगसंगै हामीले उत्तरतिरको बेइजिङ विश्वविद्यालयमा पनि पढाउनुपर्ला । दक्षिणतिर त झन पढाउनुपर्छ । ठूलो शक्तिले थिच्दाखेरि नचाहँदा नचाहँदै पनि साना शक्तिका इलिमेन्टहरू कसरी उछिट्टिएर माथि आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा दक्षिण्तिरका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पढाउनुपर्छ ।
अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने ?
मलाई धेरैले सोध्ने गरेको प्रश्न हुन्छ–के अब केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? केपी ओली प्रधानमन्त्री हो कि होइनन् ? प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हो कि होइनन् ? मैले भन्ने गरेको छु–केपी ओली र प्रचण्डको चिन्ता नगर्नुस् । चिन्ता त्यसको गर्नुस्, जसले यत्रो जग बनायो, कम्युनिस्ट आन्दोलन बनायो, ती सारा पार्टी कार्यकर्ताको गर्नुस् । केपी ओली र प्रचण्डको के चिन्ता छ ? उहाँहरू जे हुनुपर्ने हो त्यो भइसक्नुभयो । अब एउटा साहसिक निर्णय गर्नुभयो भने उहाँहरू दुवै नेलसन मण्डेला बन्नुहुन्छ । पार्टी एकता गर्ने भन्ने घोषणा गर्दा उहाँहरूले डिस्टङसन त ल्याइसक्नु भयो, ८० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याइसक्नुभयो, जुन पार्टी एकताको घोषणा गरेको दिन उहाँहरूले शतप्रतिशत नम्बर ल्याउनुहुन्छ । त्यसपछि अब फेरि परीक्षा दिँदैनौं, हामी हिँड्यौंँ भन्न पनि सक्नुहुनेछ । त्यसो भने पनि ठीकै छ, हिड्नुस् । तर फेरी एक पटक परिक्षा दिन्छौं भन्नुभयो भने उहाँहरूले एउटा छुट चाँहि पाउनुहुन्छ । त्यो भनेको पहिलो परिक्षामा १ सय नम्बर ल्याइसकेपछि अर्को परिक्षामा ९० नम्बर ल्याएर विदा हुने छुट चाहिँ छैन । अर्को परिक्षामा एक सय प्लस नै ल्याउनुपर्छ । मेसीले अब सबैभन्दा चर्चित खेलाडीका रूपमा सन्यास लिँदै छ । फेरि खेल्न खोज्यो तर गोल हान्न सकेन भने के गर्ने ? त्यसैले हामीलाई खुसी बनाएरै उहाँहरू जानुस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । र त्यो पक्कै हुन्छ पनि ।
मलाई के विश्वास छ भने, एमालेको दोस्रो, तेस्रो तलको पुस्ता, माओवादीमा विकास भएको दोस्रो, तेस्रो तलको पुस्ता सबैसँग हामीले सहकार्य गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने यी दुइ पार्टी एकता हुँदा जुन शक्ति निर्माण हुन्छ, त्यो शक्तिलाई अब दुवै पार्टीका दोस्रो तेस्रो पुस्ताले पनि अगुवाई गर्न सक्छ । हाम्रो स्कुलिङ, विश्वविद्यालयले हामीलाई त्यस्तो बनाएको छ । त्यसैले यो कुनै हिसावले पनि गलत ठाउँमा जादैन । जानुहुँदैन । किनकी हामीले आम जनताको अनुमोदन पनि लिएर आएका छौं । दुइटा पार्टीलाई सँगै चुनाव उठाएर जसरी हामीले विजयी बनाएर आएका छौं, यो आमजनताको अनुमोदन हो । यो एकता आम जनताको पनि अनुमोदन हो । यो खालि पार्टीका नेताहरूको मात्र अनुमोदन होइन । कुनै अमुक अमुक व्यक्तिहरूको मात्र अनुमोदन होइन । यो सिंगो नेपाली जनताको अनुमोदन हामीहरू पार्टीहरूबीचको एकतामा भएको छ ।
त्यसैले हामीले इतिहासका धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं । हाम्रा अगाडि त्यतिकै ठूला चुनौतीहरू पनि छन् । विशेष गरि हामी आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई कसरी हासिल गर्छौ ? यहाँको गरिबीलाई कसरी हटाउँछौं ? यहाँका सामाजिक विभेदहरूलाई कसरी हटाउँछौं ? तराई पहाड र हिमाललाई भावनात्मक रूपले कसरी जोड्छौं ? शताब्दीयौंदेखि आजसम्म शिर ठाडो पारेर हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई उठाउन नसकेको नेपालमा हामी हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई विश्वका दुई ठूला छिमेकी देशका बीचमा कसरी उभ्याउँछौं ? आजको विश्व बजारमा हामी नेपाललाई कसरी प्रतिस्पर्धामा ल्याउँछौंं । आज वाम पन्थीहरूका कबचमा एकता हुँदै छ भन्दा देशविदेशमा युवाहरूमा उत्साह जागेको छ । युवाहरूको यो उत्साहलाई हामी कसरी जागा राख्छौं र मुलुक बनाउने कुरामा उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई विकास गर्छौं ? यी हाम्रा चुनौतीहरू हुन् ।
जब हामी यत्रा आन्दोलनका नेतृत्व गर्छौं भनेर अगाडि आएका छौं भने यी चुनौतीबाट हामी भाग्दैनौं । यी चुनौतीलाई हामी सामना गर्छौं । हामी देशको आर्थिक स्थितिलाई बढाउँछौं । नेपाललाई दुनियाँको अगाडि नयाँ पहिचान दिन्छौं । मूच्र्छित अवस्थामा रहेका युवाहरूको सपनालाई हामी जगाउँछौं । र, ती सपनालाई देश निर्माणमा लगाउँछौं । पलायन भइरहेको बौद्धिक समूहलाई देशभित्र फर्काउँछौंं । विश्वमा छरिएर रहेको नेपाली पुजीँलाई फेरि नेपालभित्र ल्याउँछौं । त्यसले सिंगो नेपाललाई एउटा सम्पन्न मुलुक बनाउँछ । हाम्रा आगामी दिशाहरू ती हुन् । राजनीतिक हिसावले अब हामीमा कुनै विमति छैन ।
नेकपा एमालेको महाधिवेशनको दस्तावेजले स्पष्ट ढंगले भनेको छ, ‘नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब नेपालमा अर्को कुनै राजनीतिक क्रान्ति हुँदैन ।’ किनकि, स्वयं माक्र्सले भन्नुभएको छ, गणतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो, व्यवस्थाको हिसाबले त्यहाँभन्दा माथि अर्को कुनै व्यवस्था हुँदैन । हामी त्यो ठाउँमा आयौं । त्यसकारण अब कुन व्यवस्था भन्ने विवाद हामीकहाँ छैन । हाम्रो संविधानले हाम्रो व्यवस्थाको निक्र्योल गरिसकेको छ । त्यसैले, हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं । प्रचण्डको अगुवाइमा भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको दस्तावेजले पनि त्यहि भन्छ । हामीले राजनीतिको मुख्य कार्यभारलाई सम्पन्न गर्यौं । त्यसैले अब हामी जाने बाटो एउटै छ । अहिले किन एमाले र माओवादी एक ठाउँमा मिल्न आइपुगे भने अब हाम्रो जाने बाटो मिल्यो ।
इतिहासतिर धेरै फर्कनुहुँदैन । कहिलेकाहीँ हामी इतिहासको भारीले किचिएर पनि उठ्न सक्दैनौं । त्यसैले इतिहासको भारीले किच्नेदिशातिर जानुहुँदैन । हामी कहिलेकाहीँ भविष्यको भन्दा ज्यादा इतिहासको कुरा गर्छौं । इतिहासको कुरा गरेर हामीले छुट पाउदैनौं । इतिहास भनेका हाम्रा सन्दर्भ हुन् । हामी को कसरी आयौं –कोहि बहुदलीय जनवादको बाटोवाट आयौं, कोहि सशस्त्र क्रान्तिको बाटोवाट आयौं । त्यो बाटोबाट आउँदा के भयो ? ती सबै पछि सक्रिय राजनीतिबबाट बिदा भएपछि प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले किताब लेख्नुहुन्छ । हामी पढ्छौं । इतिहासको समीक्षा त्यो बेला हुदै गर्छ । तर जाने भनेको भविष्यमा हो । भविष्यमा जाने बाटोका बारेमा अब हामीसँग कुनै दुविधा छैन । माओवादी भित्र पनि र एमालेभित्र पनि दुधिा छैन ।
त्यसकारण हामी यो एकतासम्म आइपुगोक हौं । र, आज नेपाली जनताले जे परिणाम हामीलाई दिएका छन्, त्यो ऐतिहासिक अवसर हामीलाई दिएका छन् । यसो भनेर हामी कुनै राजनीतिक शक्तिमाथि निषेध गर्न चाहँदैनौं । कम्युनिस्टहरूले निषेध गर्लान् कि भनेर नेपाली कांग्रेस खुबै तर्सिएको छ । सायद अहिले सत्ता नछाडीकन बस्नु पनि यसैको एउटा संकेत होला । फेरि हामीले चुनावमा भनेका पनि छौं, पाँच वर्ष होइन पचास वर्षलाई । उनीहरूलाई पचाँस वर्षसम्म चुनावै नगरी कम्युनिष्टहरूले खाने भए भन्ने परेको छ । तर, त्यो होइन । हरेक पाँच वर्षमा चुनाव सम्पन्न गरेर दशवटा चुनाव गरेर हामी जित्छौं, तिमी प्रतिपक्षमा बस भनेका हौं कांग्रेसलाई । र यहि नै हुन्छ नेपालमा । अहिले यो ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ । हाम्रो नेतृत्वले यसको सही सदुपयोग गर्छ । हामीमा कुनै घमन्ड छैन, जिम्मेवारबोध भएको छ ।
शंख बजाउँदा यी रोगहरुको उपचार आफै हुन्छ ।
हिन्दु धर्ममाथि सृखलाबद्ध आक्रमण सुरु ||
देउवालाई पार्टीबाट निकाल्ने कांग्रेसको तयारी || फरार रेशम चौधरी अदालतमा हाजिर ||
April 20, 2018 Itv Nepal